Warning: getimagesize(article_uploaded_files/b06ab4978.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
'सत्यको खोजी' हामीजस्ता अधिकांश पत्रकार र नेपाली समाजका कथित विश्लेषकहरूको मूल विषय प्रायः रहेन। विरोधका नाममा असभ्य गालीगलौज अथवा समन्वय/समझदारी गर्ने गराउने आवरणमा सत्यसँग सानो-ठूलो सम्झौता गरेर आ-आफ्नो दालभात उद्योगको निरन्तरता हाम्रो चारित्रिक विशेषता बनेको छ। कुनै-कुनै अगुवा बुद्धिजीवी वा विश्लेषकलाई यो 'दालभात उद्योग' को प्रयोग अन्यायपूर्ण पनि लाग्न सक्दछ, त्यस्ताका निम्ति 'नाम प्रतिष्ठाको धन्दा अहंकारको' शब्दावली प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति गर्दा पनि एउटा वास्तविकता परिवर्तन हुँदैन। हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ जुन समाजमा सत्य र स्वाभिमानको सानो-ठूलो मूल्य तिरेर भए पनि आ-आफ्नो दालभात वा खोक्रो अहंकार सुरक्षित राख्ने परम्परा छ।
बिपी कोइरालाले उहिल्यै भनेका थिए, 'नेपाल साँचो अर्थमा एउटा राष्ट्र बनिसकेको छैन।' उनले यसो भन्दा वर्षौंसम्म यो देशमा मुर्खहरूले बबाल मच्चाए। सत्य के भने आज पनि साँचो अर्थमा नेपाल एउटा राष्ट्र बनिसकेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको भौगोलिक एकीकरणमात्र गरेका हुन्। तर 'भूगोल' मात्रले देश कदापि बन्न सक्दैन। साँचो अर्थको राष्ट्रमा - त्यस्तालाई नेता भनिँदैन जस्तालाई नेपालमा भनिन्छ। उनीहरूलाई मात्र दोष किन दिने? हामी आफू पो कस्ता छौं र? हामीजस्ता 'ग' श्रेणीको राजनीतिक कार्यकर्ताको काम गर्ने तर पगरीचाहिँ पत्रकार, उद्योगी, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, सहजकर्ता आदिको भिर्ने, समाजको गति योभन्दा भिन्न के पो हुन सक्दथ्यो र? के त्यस्तालाई क्रान्तिकारी भन्न सकिन्छ जस्तालाई यहाँ भनिन्छ?
म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु -सत्यको खोजी हाम्रो मूल विषय कहिल्यै रहेन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ 'लोभ' होइन 'अज्ञानता र अहंकार' त्यसो हुनाको कारण बनेको छ। भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले एक पटक मलाई क्याजुअली भनेका थिए- नेपाली पोलिटिक्स अन म्यानी ओकेजन्स इज नथिङ बट अ सम टोटल अफ सम पर्सनल इगोज् (नेपाली राजनीति धेरैजसो अवस्थाहरूमा केही व्यक्तिहरूको अहंकारको समजोडबाहेक केही होइन)। सुनेर म लाजले टाउको लुकाउनेबाहेक केही गर्न सकिनँ। गोलमटोल उत्तर दिएर विषयवस्तुलाई अन्तै मोडेँ।
नेपाल आज जहाँ पुगेको छ, जुन साधनहरूको प्रयोग गरेर पुगेको छ, त्यो एकै दिन एक रातमा एकै छाकमा पुगेको होइन। छ दिन बन्द के भएको थियो आज देशमा सहमति चाइयो, सहमति चाइयो भन्ने चण्डीपाठ चलेको छ। विशेषतः हामी जस्ता सहरियाहरूको चण्डीपाठ। कसरी बसेका होलान् त्यतिका वर्ष हाम्रा ग्रामीण भेगका जनता वर्षौंसम्म चलेको राज्य र माओवादीको अघोषित बन्दका दिनहरूमा? हामीले अब बुझ्ने बेला आइसक्यो सहमतिको चण्डीपाठले हामीलाई भद्र महिला वा सज्जन जस्तो त देखाउला तर जीवनका कठोर यथार्थहरूमा त्यो सुग्रटाइले एउटा नपुसंकको स्वप्न सम्भोगबाहेक केही हुनेछैन।
आज देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द छन् भन्दैमा खासै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने देशको सबैभन्दा ठूलो उद्योग पूर्णत चालु अवस्थामा छ। 'राजनीति' नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योग थियो र अझै छ। यो उद्योग कहिले राणाहरूले चलाए, कहिले शाहहरूले, कहिले तिनका भारदारहरूले, कहिले कांग्रेसी र कहिले एमालेहरूले चलाए।
र, आजभोलि माओवादीले पनि यो उद्योग चलाउँदैछन् भने यसमा ठूलो आश्चर्य र दुःख मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। राजनीतिलाई आ-आफ्नो समूहगत स्वार्थपूर्तिको उद्योगका रूपमा चलाउने ठाउँ नभएको भए विगत ६ दसकमा आधा दर्जन संविधान, कैयौं आन्दोलन र गन्नै नसकिने सरकारहरूको देश, संसारका सबैभन्दा गरिब मानिस बस्ने देशका रूपमा नेपाल स्थापित हुने थिएन।
जीवनमा मैले पत्रकारिताबाहेक केही गरिनँ। आफ्नो विवेक र आत्मसम्मानको आवाजलाई दबाएर टेलिभिजनमा मुहार देखाउने वा कुनै पत्रिकाको सम्पादक बनिरहने रहर मलाई कहिल्यै भएन। पछिल्लो कालमा आफ्नो चढ्दो उमेर, अध्यात्ममा बढ्दो रुचि र राजनीतिज्ञहरूप्रति एक प्रकारको वितृष्णाले गर्दा राजनीतिक पत्रकारिताबाट अलि परै बसेको छु। तर आज बडा दुःखका साथ यो लेख्दैछु - हाम्रो मातृभूमि संसारमा सगरमाथा र गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिने अवस्थामात्र अब रहेन। वर्तमान युगमा यसको थप पहिचान बनेको छ - मसिक १ सय डलरका निम्ति मरुभूमिहरूको प्रचण्ड गर्मीमा हाड घोट्न बाध्य मानिसको देश, परिवार पाल्न कोठीहरूमा बेचिन बाध्य विवशहरूको देश, प्रत्येक सानाठूला पार्टीको बन्दमा 'शान्तिपूर्वक बन्धक' बनाइने मानिसहरूको देश। वाहा, क्या थप परिचय पाएको छ हाम्रो देशले! जोसँग बल छैन, लाठी छैन, संगठन छैन, जो वाइसिएल, युथफोर्स, तरुणदल वा हिन्दु परिषद्को रक्षाकवचमा बस्न सक्दैन त्यस्ता नागरिकले पटक-पटक प्रत्येक पाइलामा अपमानित हुनुपरेको छ, त्रसित हुनुपरेको छ।
जुल्पि्ककर अलि भुट्टोको एउटा भनाइ सम्झन्छु - वर्षौंसम्म पाकिस्तानी नेताहरूले पाकिस्तानी जनतालाई अपमानित नगरेको भए विदेशीसमक्ष आज पाकिस्तान राष्ट्रले अपमानित हुनुपर्ने थिएन। जुन राष्ट्रमा प्रत्येक नागरिकले बिना डर-त्रास आत्मसम्मानको जीवन बाँच्न सक्दैन त्यो राष्ट्र कहिल्यै सम्मानित हुन सक्दैन, कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन।
काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरू बिहान १० बजे वा साँझ पाँच बजे एकैछिन उभिएर हेर्नुस् त! हजारौं मानिस टाउको निहुराएर बन्दको उर्दी मानेर लुरुलुरु हिँडिरहेका हुन्छन्। हामीहरू लुरुलुरु हिँड्नको साटो कुनै दिन पा"च मिनेट एकै ठाउ"मा उभिदियौं भने खेलको नक्सा बदलिनेछ। तर खेलको नक्सा बदलिए पनि त्यसले समाधानचाहिँ आउने छैन। किनभने द्वन्द्वभित्र समाधान छैन तर समाधान दादागिरीमा पनि छैन। ज्ञानेन्द्रको दादागिरी नमान्ने समाजले अझ कसैको दादागिरी धेरै समय मान्ला भन्ने भ्रममा नबस्नुमा नै सबैको कल्याण छ। नेपाली जनताले माओवादीलाई सुशासन र परिवर्तनको विश्वासमा मत दिएका थिए न कि आफूमाथि कुनै एकाधिकारवादी दण्डाधिकारवादी नियुक्त गर्न। हारेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन पनि जनताले मत दिएका थिएनन्।
'कारोबार' आर्थिक दैनिकले एउटा रोचक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। जसअनुुसार अहिले माओवादी आन्दोलनको यातायात, खानापिना, गानाबजानाको खर्च बीसौं करोड रुपैयाँ देखाइएको छ। सत्य हो आज माओवादी प्रदर्शनहरूमा भीड छ। तर कति छ? रत्नपार्क खुल्लामञ्च सबै भरियो भने त्यसमा कति मानिस अटाउने क्षमता छ? वाइड एंगल लेन्सबाट खिचिएका तस्बिर छाड्नुस्, वैज्ञानिक यथार्थमा आउनुस्।
रत्नपार्क खुल्लामञ्च कुनै हावामहल होइन, त्यसको एउटा निश्चित लम्बाइ र चौडाइ छ। त्यस क्षेत्रफलमा कुनै पनि हालतमा ३५ देखि ४० हजारभन्दा बढी मानिस अट्न सक्दैनन्। सहिदगेटदेखि न्युरोडसम्म जुलुस हिँड्यो भन्दैमा त्यो लाखौंलाखको जुलुस हुनै सक्दैन। शब्दमा 'लाखौं लाख' लेख्न चार थान अक्षर भए पुग्छ तर जीवनमा एक लाख संख्या पुर्‍याउन एकको पछाडि पा"च वटा सुन्य चाहिन्छ। जुलुस चाहे माओवादीको होस् वा गिरिजाबाबुको शवयात्राको होस् या शुक्रबार वसन्तपुरमा आएको होस् अब हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूलाई 'क्राउड इस्टिमेटि साइन्सको' प्रारम्भिक पाठहरूको नितान्त आवश्यकता भैसकेको छ।
विगतमा आएका र भोलि-पर्सि आउने प्रत्येक शान्तिपूर्ण जुलुसको भावनाप्रति हामीले पूर्ण आदर भाव राख्नुपर्छ। तर यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि तीन करोड मानिसको देशमा कति खर्च गरेर कति मानिस सडकमा ओरालियो भने कसले के-के दिँदै जाने हो? भोलिका दिनमा मधेसवादी दलले काठमाडौंमा एक लाख मानिस ओरालिदिए उसले एक मधेस एक प्रदेश पाउने कि नपाउने? विश्व हिन्दु परिषद्ले ४०-५० हजार मानिस दस दिनसम्म सडकमा ओरालिदिए 'हिन्दु राष्ट्र' पाउने कि नपाउने? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कति मानिस उतारिदिए राजतन्त्र फिर्ता पाउने?
यी सब वाहियात तर्क हुन्। सत्य के भने नेपालको संविधानसभा र त्यसका सदस्य करोडौं-करोडौं रुपैयाँ खर्च गराएर वर्षौंसम्म जनतालाई फाल्तु कुरा सुनाएर अब पूर्णतः असफल हुने दिनको संघारमा आइसकेका छन्। संविधान बनाउने मूल प्रश्नबाट सोझा जनताको ध्यान अन्तै सार्न कोही सडकमा अनि कोही सिंहदरबारमा भित्र बसेर जनतालाई नौटंकी देखाउँदैछन्। र, हामी सर्वसाधारणचाहिँ टेलिभिजनमा सडक र सिंहदरबारभित्र देखाइएको नाच हेरेर संविधानको मूल प्रश्नबाट जनताका ध्यान हटाउने षडयन्त्रमा जानीनजानी सहभागी हुँदैछौं। यसरी बन्छ संविधान? यसरी आउँछ शान्ति?
आजको दिनमा माओवादी नेपालको सबभन्दा ठूलो दलमात्र होइन, सबभन्दा ठूलो उद्योग पनि हो। यसको आम्दानी, लगानी, खर्च, रोजगारी, परोपकार आदिको बजेट करोडौं होइन अर्ब हुन्छ होला। यसको नाम सुनेरमात्र डराउने सामान्य जन पनि धेरै होलान्। तर यति शक्तिशाली, धनशाली र बलशाली भइकन पनि यो वा अन्य कुनै पनि पार्टी आमजनताभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। कहिल्यै सक्दैन। भलै त्यसका कतिपय कार्यकर्तालाई त्यस्तो भ्रम हुन सक्दछ। माओवादी पार्टीको नामले र यसका नेता कार्यकर्ताको आचरणले आममानिसका मनमा त्रास होइन आदर उत्पन्न भएको दिन नेपालको भविष्य बदलिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। ऊर्जा छ यो दलमा, त्यसलाई सिर्जनात्मकतामा बदल्ने साहसी निर्णयको खाँचो छ।
हो, माओवादी पार्टीलाई केही विषयमा अन्याय भएको छ। जनताको सबभन्दा धेरै भोट पाएर पनि उसलाई घेराबन्दी गरेर सरकार नेतृत्व गर्ने उसको अग्राधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। म आज पनि ठान्छु, सरकारको नेतृत्वको असली हकदार पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै हुनुहुन्छ। 'तपाईंले सरकार छाड्नै हुन्नथ्यो, सरकार छाडेर तपाईंले देशमा समस्या बढाउनुभयो' भन्ने कुरा मैले उहाँलाई पद छाडेको केही महिनापछि निजी भेटमा भनेको थिएँ।
आज फेरि प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु - तमाम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनीका बावजुद, तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाल (जो ३ महिनापछि स्वतः रिटायर हुँदै थिए) लाई हटाउने रिस्की खेलमा तपाईंलाई सुर्‍याउने तपाईंको पार्टीभित्र-बाहिर को-को थिए एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् र चिन्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री छँदा नेपालभित्र आफूले २८ प्रतिशतमात्र मत लिएर जे गरे पनि हुन्छ र त्यतिमात्र होइन, दक्षिण एसियाको सामरिक नक्सा बदल्ने कोसिस गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच सही थियो वा गलत, प्रचण्डजीलाई बढ्ता थाहा होला। पोहोर साल उहाँले पद त्याग गरेपछि डा. तुलसी गिरी भन्नुहुन्थ्यो, 'हेर्नुस् विजयबाबु, अब नेपालको राजनीतिको आगामी केही समय भारत र माओवादीको आपसी सम्बन्धको स्थितिबाट फैसला हुनेछ।' उच्च कुटनीतिक स्रोतहरू बताउँछन् - प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डजी आफ्नो पुष्पकमल रूप लिएर भारत जाँदै त्यहाँका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग नेपाली सेना, त्यसमा हुने समायोजन संख्या र शान्तिप्रक्रियाका चरणबारे केही बचनबद्ध भएका थिए।
कुरा के थियो/थिएन, प्रचण्डजी जान्नुस् या मनमोहन सिंह जान्नुहोला। दक्षिण एसियाको राजनीतिका महान विद्वान मेरा प्रोफेसर स्व. लियो रोज भन्नुहुन्थ्यो, 'भारत कुनै ठूलो मन भएको राष्ट्र होइन। उसका स्वार्थहरू मात्र स्थायी हुन्छन्, मित्रहरू होइनन्।' माओवादी नेतृत्व र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै पारदर्शी रहेन, आज पनि छैन। फरक-फरक कालखण्डमा नेपाली माओवादी नेताहरूलाई भारतका फरक-फरक एजेन्सीहरूले फरक-फरक स्थानमा फरक-फरक ढंगले 'डिल' गरेका छन्। अहिलेको अवस्थामा माओवादीविरुद्ध तानाबाना बुन्न भनौं या पुराना प्रतिबद्धता सम्झाउन, भारत खुलेआम लागेको देखिन्छ। नेकपा माओवादीको एउटा हिस्सा भारतको यो कामबाट वाक्कदिक्क र क्रोधित भएको छ भने त्यो स्वाभाविकै हो। कमरेड प्रचण्डले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुभएको छ कि आजभोलि जुन उल्टो गंगा बग्दैछ त्यसको गंगोत्री कहाँ छ भनेर।
यस अर्थमा 'वार्ता नोकरसँग होइन मालिकसँग गर्छौं' भन्ने कमरेड प्रचण्डको भनाइमा ठूलो दम छ। तर के 'मालिक' का नजरमा कमरेडको मूल्य कुनै अर्को कथित 'नोकर' भन्दा खासै बढी छ त? यो प्रश्नको उत्तर जुल्पि्ककर अलि भुट्टोले दिइसक्नुभएको छ, एकचोटि दोहोर्‍याइदिन्छु - वर्षौंसम्म पाकिस्तानी नेताहरूले पाकिस्तानी जनतालाई अपमानित नगरेको भए आज विदेशीसामु पाकिस्तान राष्ट्रले अपमानित हुनुपर्ने थिएन। जुन राष्ट्रमा प्रत्येक नागरिक बिनाडर-त्रास, आत्मसम्मानको जीवन बा"च्न सक्दैन, त्यो राष्ट्र कहिल्यै सम्मानित हुन सक्दैन, उँभो लाग्न सक्दैन।'
कति आश लिएर नेपाली जनताले जेठ १४ को प्रतीक्षा गरेका थिए। नयाँ संविधानको सुनौलो बिहानी ल्याउने दिन भनेर। अब जनतालाई डर लाग्न थालेको छ कतै त्यो दिनले गृहयुद्ध त ल्याउने होइन कि भनेर! त्यो भयानक सम्भावनालाई कम गर्ने क्षमता भने अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मा नै छ। त्यसका लागि नयाँ कुरा केही दिनुपर्ने छैन, सिर्फ १२ बुँदे समझदारीका बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ। माओवादीलाई सिभिलियन पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। यसपटक यो प्रतिबद्धता उधारो होइन, नगदीमा गर्नुपर्नेछ।
तत्पश्चात सरकारको मात्र होइन देशकै नेतृत्व नेकपा माओवादीले गर्दा पनि सबै नेपाली खुसी नै हुनेछन्। माओवादी बीसौं लाख भोट पाएको पार्टी हो, भोलिका दिनमा अझ धेरै मत पाउने क्षमता राख्दछ। यस्तो पार्टीले आफ्नो क्षमता र सम्भावना प्रमाणित गर्न करोडौं रुपैयाँ जबर्जस्ती उठाएर हजारौं मानिसलाई दसौं दिनसम्म सडकमा प्रदर्शित गरिराख्न पर्दैन। माओवादीले विगतका कठिन वर्षमा आफ्नो सौर्यले नेपाली जनताको चेतना अघि बढाउन, सदियौंदेखि शोषित निमुखा जनतालाई आवाज दिन ऐतिहासिक र महान योगदानहरू पनि गरेको छ। प्रदीप गिरीका शब्दमा भन्ने हो भने 'माओवादीले नेपाली समाजमा अभूतपूर्व राप र ताप उत्पन्न गरेको छ तर प्रकाश उत्पन्न गर्न सकेको छैन।'
अब बेला आएको छ प्रचण्डजी अघि बढ्नुहोस् राप र तापमात्र होइन नेपालमा प्रकाश पनि उत्पन्न गर्नुहोस्। त्यस कार्यमा चाहिँ हामीजस्ता असंख्य सर्वसाधारण पनि तपाईंसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न हमेसा तयार हुनेछौं।.